Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọgwụ ịba ọcha n'anya C na-eji ule nyocha Origami ọhụrụ
Nnwale ọhụrụ maka ịba ọcha n'anya C nke na-eji akwụkwọ apịaji ụdị origami na-ebuga ngwa ngwa, nke ziri ezi na nke dị ọnụ ala nwere ike inyere aka n'ọgụ zuru ụwa ọnụ megide nje na-egbu egbu.
Nnwale a, nke ndị injinia biomedical na ndị ọkachamara n'ihe banyere nje si na Mahadum Glasgow mepụtara, na-ebute nsonaazụ n'akụkụ dịka nnwale ụlọ COVID-19 n'ime ihe dị ka nkeji iri atọ.
N'akwụkwọ ọhụrụ e bipụtara taa na akwụkwọ akụkọ Nature Communications , ndị otu nyocha na-akọwa otú ha si zụlite usoro ahụ. Ọ na-ewuli elu na ọganihu gara aga na nyocha ngwa ngwa na virology na Mahadum, na-ebute nsonaazụ na 98% ziri ezi.
A na-eche na ịba ọcha n'anya C, nje na-efe efe nke na-emebi imeju, na-emetụta ihe karịrị nde mmadụ 70 gburugburu ụwa. Mmetụta nje na-emetụta imeju na-adị ngwa ngwa, ndị ọrịa nwere ike ọ gaghị aghọta na ha bu ọrịa ahụ ruo mgbe ha dara ọrịa siri ike na nsogbu ndị dị ka cirrhosis ma ọ bụ kansa.
Ọ bụrụ na achọpụtara ọrịa ahụ tupu ya aga n'ihu nke ukwuu, enwere ike ịgwọ ya nke ọma site na iji ọgwụ dị ọnụ ala, dịkwa ngwa ngwa. Otú ọ dị, ihe dị ka pasent 80 nke ndị nwere nje ahụ amaghị banyere ọrịa ha ruo mgbe nsogbu ụlọ ọgwụ na-eme.
N'ihi nke a, ihe dị ka mmadụ 400,000 gburugburu ụwa na-anwụ site na ọrịa ịba ọcha n'anya C kwa afọ, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịzọpụta ha site na nyocha na ọgwụgwọ mbụ.
Ka ọ dị ugbu a, a na-achọpụta ọrịa ịba ọcha n'anya C na ọnọdụ ụlọ nyocha site na iji usoro ụzọ abụọ nke na-anwale ọbara maka ọnụnọ nke ọgwụ nje na nchọpụta RNA ma ọ bụ isi antigens nje.
Usoro ahụ nwere ike iwepụta oge dị ukwuu iji wepụta nsonaazụ, na-abawanye ohere na ụfọdụ ndị ọrịa na-anwale ule ahụ agaghị alaghachi azụ ịmata ihe ga-esi na ya pụta. Ịnweta ule nwekwara oke na mba ndị dị ala na nke etiti, ebe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nwere ịba ọcha n'anya C bi.
Ọ bụ ezie na emepụtara ule ndị ọzọ enwere ike ibugharị ngwa ngwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya, enwere ike ịbelata izi ezi ha, ọkachasị n'ofe ụdị mmadụ dị iche iche.
Usoro ọhụrụ nke otu Mahadum Glasgow na-edu, ka ọ dabara nke ọma maka ojiji gburugburu ụwa. Emebere ya site na usoro yiri nke ahụ ha mepụtara iji wepụta nyocha ngwa ngwa maka ịba, bụ nke anwalela ya na nsonaazụ agbamume na Uganda.
Ngwaọrụ ahụ na-eji mpempe akwụkwọ origami dị ka apịaji apịaji iji kwado ihe nlele maka usoro mara dị ka amplification isothermal na-emekọrịta ihe, ma ọ bụ LAMP. Usoro mpịachi akwụkwọ na-enyere aka ịhazi ihe nlele ma nyefee ya n'ime obere ụlọ atọ dị na katrij, nke igwe LAMP na-ekpo ọkụ ma na-eji nwalee ihe nlele maka ọnụnọ ịba ọcha n'anya C RNA. Usoro a dị mfe nke ukwuu na ọ nwere ike, n'ọdịnihu, a ga-ebuga ya n'ọhịa, site na nlele ọbara nke a na-ewere n'aka onye ọrịa site na mkpịsị aka.
Usoro na-ewe ihe dị ka nkeji iri atọ. A na-ebuga nsonaazụ ya site na mpempe mpụta dị mfe ịgụ dị ka ule ime ime ma ọ bụ ule COVID-30 nke ụlọ, nke na-egosi eriri abụọ maka nsonaazụ dị mma yana otu band maka adịghị mma.
Iji nwalee prototype ha, ndị otu ahụ jiri usoro ahụ nyochaa 100 ihe nlele plasma ọbara na-amaghị aha sitere na ndị ọrịa nwere ọrịa HCV na-adịghị ala ala yana ihe nlele 100 ọzọ sitere na ndị ọrịa HCV na-adịghị mma, bụ ndị mere dị ka otu njikwa. A nwalekwara ihe nlele ahụ site na iji usoro nyocha ọrịa ịba ọcha n'anya C nke Abbott RealTime iji kwado nsonaazụ LAMP. Nnwale LAMP weputara nsonaazụ bụ 98% ziri ezi.
Ndị otu a bu n'obi iji usoro a na nnwale ubi na ndịda Sahara Africa n'afọ na-abịa.
Akwukwo otu a, nke akpọrọ 'Loop mediated isothermal amplification' dị ka ngwá ọrụ siri ike maka nchọpụta mmalite nke nje ịba ọcha n'anya C', ka ebipụtara na Nature Communications. A kwadoro nyocha a site na ego sitere na Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Medical Research Council na Wellcome Trust.